Ahoana ny fomba fihinanana Pretzel gourmet? | Martech Zone
Alakamisy Oktobra Oktobra 18, 2007 Alakamisy Oktobra Oktobra 18, 2007 Douglas Karr
Tamin'ny talata dia nandeha fitsangatsangana mahery avy tany Indianapolis nankany Tampa mankany Atlanta aho ary niverina tany Indianapolis. Tsy nisy fotoana hitsidihana namana na fianakaviana (tsy niantso azy ireo akory aho hilaza azy ireo)… fivoriana fotsiny ary miverina eny amin'ny habakabaka. Natao ny sidina nataontsika Airtran ary gaga be aho.
Angamba ny ampahany lehibe indrindra tamin'ny sidina dia ny nidina tao anaty kitapo kely misy ny pretzel maimaimpoana sy ny famakiana ilay fonosana:
Izaho dia mpampinono amin'ny dokam-barotra hendry ary tena nahazo fanalana tamin'ity iray ity!
Tags: 2011fampisehoana blogworldblogworld los angelesbara ambony wordpress
Oct 19, 2007 amin'ny 8: 42 AM
Mananihany ahy ve ianao! Kitapo matotra ve ity ???? Mangetaheta varotra ve izy ireo? Raha ny tena izy dia tsy dia misy dikany ary eo imasonao… tiako io… .fa tsy nino an'io aho rehefa namaky azy io.
19 Okt 2007 amin'ny 2:56 PM
Mahafinaritra izany. Mpinono ihany koa aho. Hihinana ilay kitapo b / c an'ny fonosana fotsiny aho ary tsy tiako akory ny pretzel.
20 Okt 2007 amin'ny 1:49 PM
Malina izany, omeko azy ireo izany, fa ny mahay kosa tsy mandoa ny faktiora. Manontany tena aho raha miteraka famandrihana.
Air Tran dia manana rafitra mpivarotra / làlana somary voafaritra tsara, noho izany dia mety ezaka fotsiny hanatonana ny mpanjifa izany, fa tsy ezaka ataon'ny orinasa.
20 Okt 2007 amin'ny 9:18 PM
Alao an-tsaina ny fahatairako raha nahita ny lahatsoratranao niaraka tamin'ny sarin'ny sakaosy pretzel iray vao avy nohaniko andro vitsivitsy lasa izay tamin'ny sidina iray avy tany Ohio nankany / avy any Orlando, Fla! Doka mahagaga, sa tsy izany?
Raha ny marina, ity lahatsoratra ity dia fialan-tsiny tsara ho ahy hanoratako hevitra anao satria nanandrana nampiasa ny contact contact aho mba hanontany anao hoe maninona aho no mety manana olana amin'izany ao amin'ny bilaogiko. Nanontany olona tsy tambo isaina aho handefa ahy ny hafatra fanandramana amin'ny alàlan'ny form anao, saingy tsy mandeha izy noho ny antony sasany. Tsy tonga amin'ny mailako io.
Ny hany zavatra azoko eritreretina dia ny mailaka apetrako ao amin'ny endrika fifandraisanao dia ilay mailaka ampiasako ao amin'ny tontonana admin. Mety ho izany ve no antony?
Satria tsy mbola namaly ny hafatro tamin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisanao ianao, manontany tena aho raha misy olana amin'izany ho an'ny olona rehetra, ao anatin'izany ny tenako izay mampiasa azy.
Oct 23, 2007 amin'ny 7: 29 AM
Tsy azoko antoka hoe inona ny olana. Alefaso imailaka amin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisako amin'ilay pejy andefasanao azy. Mampiasa ny fahaizan'ny mailaka WordPress ny plugin ka tokony handefa hafatra toy ny bilaoginao.
Oct 23, 2007 amin'ny 7: 49 AM
Nataoko ny nangatahinao ary nofenoiko ny taratasy fifandraisanao, tamin'ny fampiasana ny adiresy mailaka mahazatra (stephen (at) sjhopson (dot) com Tena nanandrana nifandray taminao tamin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisanao aho fa tsy naheno anao mihitsy. Mampanontany tena ahy aho raha misy misy zavatra tsy mety amin'ny contact contact.
Rehefa nanoratra tamin'ny hafatro tamin'ny alàlan'ny endrika fifandraisana aho, isaky ny nampiasa ilay adiresy mailaka voalaza etsy ambony aho, ireo izay te-hanantona ahy tamin'ny alàlan'ny taratasy fampifandraisana anao tao amin'ny bilaogiko dia tsy nahazo ny hafatr'izy ireo mihitsy. Tsy nandray azy ireo mihitsy aho.
Na izany aza, rehefa nanova ny adiresy mailaka nataoko tamin'ny sjhopson (at) yahoo (dot) com aho dia tonga soa aman-tsara ny hafatrao tamin'ny alàlan'ny taratasy fifandraisana.
Mihevitra ve ianao fa misy ifandraisany amin'ny zava-misy fa ny adiresy stephen (at) sjhopson (dot) dia ampiasaina ho adiresy mailaka an'ny mpitantana? Mety misy ifandraisany ve izany?
Gaga aho fa tsy hitako izay manakana ahy tsy hampiasa ny adiresy mailaka lehibe: stephen (at) sjhopson (dot) com satria ny adiresy ampiasain'ny form contact anao handefasana hafatra.
23 Nov 2009 tamin'ny 6:49 PM
Douglas, izaho koa dia voasarika tamin'ny pretzels AirTran. Fomba marani-tsaina hitazomana ny marketing, ny marika fotsiny.